IVANGELI: INYANGA KUKUHLOLA KWEALBHU YEHLABATHI EFILEYO - IINDABA
INyanga liLizwe eliFileyo
Prog-esque band ifumana umhlaba ophakathi phakathi kwe-math-rock kunye ne-technical hardcore / isinyithi.
Masijongane nayo: Inkqubo ayizange ipholile. Utitshala wakho wokuqala wegitare, owayenehempe enguEwe, wayengapholanga. Umntwana endimaziyo owayekhonza uNeil Peart, kwaye enephepha mvume elalifundeka 'DRUMGUY' alipholanga. Nokuba ungayithanda kangakanani iGenesis, ayizukuyicima into yokuba ekugqibeleni uPeter Gabriel wamshiya ephethe uPhil Collins. Kwelinye icala, iVangeli ipholile. Kupholile ngokwaneleyo ukufumana imvume kwibhanti enezinto ezimhlophe, umnqwazi wetrakhi esecaleni, isihlwele esingasemva se-pocket bandana, kunye nesihlwele esingavalwanga (kunye nesentombi).
abantwana abaphakathi balahlekelwe zizihlobo
Yintoni eyenza iVangeli ipholile? Kungangumbala osebenzayo kaKrim Crimson ngokudlula kwiConverge riffs, owenziwe ngomsebenzi wegubu okhumbuza uDamon Che waseDon Caballero udumo kunxila, kunye nokuqaqamba kweKillmen-esque guttural yells. Ke kwakhona, kunokuba nje ukuba ibhendi ichithele kumhlaba ophakathi ophakathi kwe-rock-math kunye ne-technical hard / metal. Ayilulo uhlobo oluxineneyo njengoko iminyaka ibonakalisile ukuba amabhendi anzima aneempembelelo zokuqhubela phambili aphela esiba sisinyithi esimnyama, iDrama Theatre, Amanxuwa, okanye iprojekti enobudlova ye-Weasel Walter.
Yinto elungileyo yeVangeli ukuba negubu lokuzonwabisa: Ukubetha kwakhe incence yeyona nto iphambili kumxube. Ngokwenyani sivunyelwe ukuba sibonakalise ngokubonakalayo umsebenzi webhodibhodi, engaqhelekanga kwi-albhamu engengomdaniso olungele ukuthengiswa kwisihloko eshushu. Kodwa ubenza njani abantwana babe neenwele zemeko ukuba baphulaphule i-mutant prog? Yenza nje yonke imikhondo ijikeleze uphawu lwemizuzu emihlanu. Lumka? Kunjalo. Kodwa imizuzu engama-9 ethi 'A Dawn Dawn' ingqina ukuba kutheni le nto isebenza-yeyona ngoma ihlwempuzekileyo Inyanga . Iyasilela ukubengezela kwaye iphele ngokuvakala njengokuphuma kwiTrail of Dead practice.
ngezibane ngaphandle kwe nirvana
IVangeli zisebenzisa izixhobo zorhwebo ukulungisa iingxaki zabaphulaphuli (abantwana abanzima) ngeprog. Iingalo ezijikelezayo zemigca yegitare kunye nemigqomo ye-'Yr Electric Surge imnandi 'ibhulorho phakathi komsindo we-hardcore kunye noqheliso olubanzi lweprog. 'Kwaye ukuHlengwa kugcwalisa ezona Ntliziyo zeentliziyo' zilawula ukujova uhlobo olugqwethiweyo lolona mgangatho uphambili wee-hardcore gimmicks, ukuphazamiseka. Ngokuqinisekileyo bayazifihla kancinane, kodwa abonelanga kukungaziphathi kakuhle iindlebe zikaNorma Jean abantwana, emva koko bahamba baye ngqo kwikhibhodi ephefumlelweyo kaKing Crimson kunye nokudlala ikatala. Bade baye kude benze isixhobo esithandekayo phantsi komhlaba kunye nemigca yeekatala yakuMbindi Mpuma kunye nesandi sokudlala isixhobo 'seOpium'. (Bendimba iVangeli de bandenza isixhobo sokukhangela kwaye ndilahlekelwe yinto encinci endinayo njengomvavanyi womculo.)
Ukuqhatha abantwana bekungayi kuba nazintloni ukuba andizukungqunga umyalezo weVangeli. Kuyavunywa, babonisa iimpembelelo zabo. IVangeli ikhulula iimpembelelo zabo ukubuyekeza uninzi lweqela labo abalithandayo lokufaka ipolishi yamandla obundlobongela. Mhlawumbi iVangeli ipholile kuba banobuchule ngokwaneleyo ukuba bangaqhubekeka kunye ne-hardcore yanamhlanje ehlaziyiweyo. Kodwa ukwazi indawo yanamhlanje enzima, mhlawumbi iVangeli ipholile kuba uKurt Ballou waseConverge urekhode i-albhamu yakhe kwaye uConverge wenza ezinye zezona ndawo zibalaseleyo kwimarike.
Ividiyo kendrick lamar grammy yokusebenza
Richard ikhawuleze ihex
Rappers njengabalinganiswa naruto
rae sremmurd kunye ne-lil yachty
Imfazwe yeziyobisi discography
Lil durk eli tyala